Kenya oo hoos u dhigii ugu badnaa ku sameysay qiimaha shidaalka muddo 4 sano ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi: Dadka Kenyanka ah ayaa ku naaloonaya qiima dhimistii ugu hooseysay mudo 4 sano ah lagu sameeyo ascaarta shidaalka kadib markii ay gudiga maareynta maamulka tamarta ee ERC mar kale dib u eegis ku sameeyeen qiimaha shidaalka.
Qiimaha baasiinka ayaa laga bilaabo xalay saqdii dhexe waxaana laga dhimay 9 shilin iyo 13 cent, halka naaftadana hoos loo dhigay 7 shilin iyo bar.
Tani ayaa ka dhigan in haatan wixii ka dambeeya ay dadka shidaalka isticmaala ku iibsan doonaan litirkii wax ka yar 100 shilin.
Tallaabadaan qiima dhimista cusub ah ee lagu sameeyay sicirka shidaalka ayaa lagu wadaa in ay gacan ka geysato hoos u dhac ku yimaada qarashaadka ku baxa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee nolosha bulshada.
Gudiga maareynta maamulka Tamarta ayaa bilihii lasoo dhaafay si is daba joog ah u waday qiima dhimista ay ku sameynayaan saliida ceyriin.
Hoos u dhaca ayaa ah mid ka jira guud ahaan caalamka, iyadoo wadama soo saara shidaalka ay maalmihii lasoo dhaafay si weyn u raqiisiyeen shidaalka.